कसरी एक सङ्लग्न टिप्पणीहरू कागजात सूत्रमा देखिँदैन?
टिप्पणीहरू डबल प्रतिशत चिन्हबाट सुरु हुन्छ %%, र पछिल्लो पङ्क्ति-अन्त क्यारेक्टरमा बिस्तारित हुन्छ (कुञ्जी प्रविष्ट गराउनुहोस्). सबै जुन बीचमा आउँछ तिनीहरू उपेक्षा गरिन्छ र बाहिर टङ्कण हुँदैन । यदि त्यहाँ पाठमा प्रतिशत चिन्ह छन् भने, तिनीहरू पाठको अंशको रूपमा निर्माण गरिन्छ ।
a^2+b^2=c^2 %% पाइथागोरेन थिओरम
Title is: टिप्पणीहरू घुसाउँदा